Food and Drink Archives - For Her Myanmar
Food and Drink	Food and Drink, General
လန်းဆန်းစေမယ့် အရသာအသစ်နဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ငါးခဲပတ် ငါးကို ကြော်စား ချက်စား ပေါင်းစားရတာတွေ ရိုးအီနေသူများအတွက် ထူးဆန်းတဲ့ ဟင်းလျာအသစ်လေးပါ။ ထမင်းနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်လို့ရသလို မိသားစု…
အစားတစ်လိုင်း ပျိုမေတို့ ဝင်ရှိုးလိုက်နော်။ သွားရည်ယိုသွားမယ်။👇👇👇 ဆောင်းတွင်းရောက်ရင် ဘယ်လို အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းရမယ် ၊ဖက်ရှင် ဘယ်လို ဝတ်စားရမယ်ထက် အစားအသောက်တွေ ဘယ်လိုစားရင်ကောင်းမလဲ တွေးနေတဲ့ အစားကြီးပဲ…
စားပြီးရင်း ထပ်စားချင်နေမယ့် လွယ်ကူ ရိုးရှင်း အာလူးကြော်လေး အာလူးမကြိုက်သူရယ်လို့ ရှားပါတယ်။ အာလူးကြော်ဆိုရင်တော့ ပြောမနေနဲ့တော့။ အာလူးဟာ အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ လုပ်စားလို့ရတဲ့ အမယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။…
ဒီနေ့မှာတော့ ဆောင်းတွင်းအေးအေးမှာ အစားပျက်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ ထမင်းမြိန်စေမယ့် ကျောက်ပွင့်သုပ် (ရခိုင်) နည်းလေး ပြောပြမယ်နော်။ လိုတာတွေကတော့ တရုတ် ကျောက်ပွင့် ခရမ်းချဉ်သီး…
“ငါးမိနစ်အတွင်း ရှူးရှဲ ကြက်အူချောင်းလေး လုပ်စားကြမယ်” မာလာဟင်း မာလာခေါက်ဆွဲ မာလာငါးတွေက မိန်းကလေးတွေအကြိုက် ပူပူစပ်စပ်လေးဆိုတာ ပျိုမေတို့ သိပြီးသားပါနော်။ ဒီတစ်ခါတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ မာလာကြက်အူချောင်းလေး လုပ်စားကြမယ်လေ။…
အစားအသောက် ဆန်းဆန်းကလည်းကြိုက် လုပ်ရခက်မှာလည်း စိုးရိမ်တဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် ဟောဒီ့မှာ သွားရည်ကျ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ကြက်အူချောင်း ထမင်းကြော် ပြုလုပ်နည်းပါ ဆောင်းတွင်းမှာ ပူပူနွေးနွေးထမင်းကြော်ကလေးနဲ့ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် သောက်လိုက်ရလျှင်ဖြင့်…
ဒိန်ချဉ်ကြိုက်သူများအတွက် ဒိန်ချဉ်ကို ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ လုပ်စားကြမယ်။ နို့ထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဒိန်ချဉ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ကြိုက်သူများတာမို့ ဒိန်ချဉ်ကို ဒီအတိုင်းစားရတာ ရိုးလာရင် တခြားနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ အရသာရှိရှိ…
အာလူးကို ကြော်စား ချက်စား ပြုတ်စား သုပ်စားနဲ့ ရိုးအီနေကြပြီလား? ဒါဆိုရင် တစ်မျိုးလေး ထွင်စားရအောင်။ အာလူးလုံးလေးတွေကို ဝက်သားပြားနဲ့လိပ်လိုက်ရင် ဘာအရသာလေးများထွက်လာမလဲ??? အရမ်းလွယ်တယ်နော် လုပ်စားကြည့်ရအောင်လား။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ…
မနက်စာပဲ ဖြစ်စေ၊ ညနေအစာပြေပဲ ဖြစ်စေ စားလို့အသင့်တော်ဆုံး sandwich လေးပါ။ အဆီအစိမ့်မပါပဲ အာဟာရဓာတ်လည်းကြွယ်ဝတဲ့အတွက် diet လုပ်တဲ့ပျိုမေတို့ စမ်းလုပ်စားသုံးကြည့်ဖို့အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပြီနော်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ -ပေါင်မုန့်…